Lalàna · Jona, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Lalàna · Jona, 2017
Tantara mikasika ny Lalàna tamin'ny Jona, 2017
Hitokona Tsy Hisakafo Ireo Mpitantana ny Fantsona Telegram Nogadraina Ao Iràna
Nokianin'ny sampana politika mpitahiry ny fomba taloha am-pahibemaso ho tsy nety nanivana ireo zavatra navoakan'ny Telegram ireo mpitantana ny hery afovoan'ny Filoha Hassan Rouhani.
Azia Atsinanana30 Jona 2017
Togo30 Jona 2017
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana29 Jona 2017
(Fanamarihana: Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2009) Miresaka mikasika ireo maodelin'ny fitondrantenan'ny vahoaka ao Kazakhstan eo anivon'ny fiarahamonina ny Megakhuimyak… [ru]: Tian'ireo olona aty amin'ny Firenena an-dàlam-pandrosoana manokana ny mandany ny volany amin'ny fisehosehoana, indrindra, rehefa misy hidirany amin'ny lanonam-panambadiana. Vao nisy mpifankatia nanambady, fa efa dolara an'aliny sahady no lany. Avy eo mandoa...
Rahonan'ny Polisy Amin'ny Alàlan'ny Twitter Hoe Hosamborina ireo Maldiviana Bilaogera Any Ivelany
Maldiviana efatra mpitoraka bilaogy sady mpikatroka izay mipetraka any ampitan-dranomasina ho nandefasana didy fisamborana avy any amin'ny polisy tamin'ny herinandro lasa teo. Araka ny fahitana azy dia toa nokendrena izy ireo satria manondrotra ny tsy fironana amin'ny finoana, na izy ireo tsy mpino.
Hametra-pialàna Sa Tsia: Roa Mpanao Lalàna Mametraka ny Raharahan'Ireo Amin'ny Fifidianana “Fitsipaham-pitokisana” Natao Tamin'ny Lehiben'ny Fitsarana Any Trinidad Sy Tobago
Karaiba27 Jona 2017
"Ny fotoana manan-danja amin'ny fikatsahana fandraisana andraikitra" na "ny antso tsy tapaka sy niely be tamin'ny haino aman-jery nataon'olom-bitsy ho [an'ny filohan'ny fitsarana] mba hialany? Henoy ny lafiny roa amin'ny fanehoankevitra.